Shirkada Africa Oil oo Heshiis ku saabsan Sahaminta Dooxada Nugaal iyo Dharoor la gashay Shirkadda Raytec Metals...
SOMALITALK - OIL
Range Resources oo Sheegtay in ay Shidaal ka Sahaminayso Badda Puntland...
Shirkadda Africa Oil Corp ayaa shaaca ka qaaday in ay heshiis la gashay shirkadda Raytec Metals Corp. ("Raytec"), heshiiskaas oo ku saabsan qandaraas wax-soo-saar wadaag oo lala gelayo Dawlad Goboleedka Puntland ee Soomaaliya iyo Jamhuuriyadda Kenya.
Shirkaada Raytec Metal oo ka hawl gasha gobolka Saskatchewan, Canada waa shirkad yar oo qaabilsan qodista macdanaha sida Potash, Suulphur, Uranium iyo Iron Ore. Warbixinada ugu horeeyey ee la xiriira warka heshiiska sahaminta ayaa tibaaxay in "shirkaddaasi ay ka yaabisay dadka maal- gashada kaddib markii ay Khamiistii May 28, 209 shaaca ka qaaday in ay Warqad Rabitaan ah la saxiixatay Afrika Oil oo ku saabsan Sahaminta Puntland iyo Kenya.
Africa Oil waxay sheegtay in shirkadda Raytec ku wareejinayso boqolkiiba 25% macaashka laysanka heshiiska wax soo saarka ee Dooxada Nugaal iyo Dharoor ee Puntland, Soomaaliya.
Sidoo kale Africa Oil waxay Raytec ku wareejinaysaa boqolkiiba 10% macaashka heshiiska wax soo saarka ee aagga loo yaqaan Block 9 iyo boqolkiiba 25% macaashka laysanka ee Kenya.
Waxaa warku tibaaxay in shirkadda Raytec ay qorshaynayso in ay aagaggaas ka hawl gasho 2009 iyo 2010.
Afrika Oil waxa kale oo ay heshiis kula jirtaa Shirkadda Range Resources ee laga leeyahay Australia, taas oo leh boqolkiiba 50% macaasha sahaminta Dooxada Nugaal iyo Dharoor.
Waxaa xusid mudan in shirkadda Africa Oil ay sahamin nooca Seismic ku samaysay Dooxada Dharoor, laakiin ilaa hadda aysan muuqan meel ay ku soo bandhigtay xogtii ay ururisay natiijadii ka soo baxday.
Idaacadda Dalmar Radio mar ay (horaantii bishii May 2009) weydiisay Agaasimaha Guud ee Macdanta iyo Batroolka Puntland, Ciise Dhollawaa, in ay heshiis shidaal waayahan galeen, waxa uu ku jawaabay "Maya ma aanaan galin, wax heshiis shidaal ah intii anigu aan joogay oo la galay ma jiro, wax haba yaraatee lagu heshiiyey ama aanu heshiis la galay ma jiro. Dawladii hore heshiisyadii ay gashay ayaan waxaan ku jiraa dib u eegsitooda in aan fiirino siday ahaayeen, maxaa ka hir galay, maxaa la qabtay." DHEGEYSO.
Shirkadaha sahaminta shidaalka ee yimaada Puntland, laga soo bilaabo 2005 waxaa muuqatay in ay goboladaas ka wadeen maaweelo, ilaa hadda lama oga ficilka dhabta ee ku aadan shirkadahaas ee uu qaadanayo maamulka cusub ee Puntland. Waxaase dhanka shirkadaha muuqda in ay sii wataan qoraaladii ku saabsanaa heshiisyada ay galayaan.
May 20, 2009 ayay ahayd markii shirkadda Range Resources ay sheegtay in ay baaritaan sahamin ee nooca seismic ku samaysnayso badda Puntland (offshore seismic). Waxayna markaas sheegtay inaysan dheg u jalaq siinaynay burcad-badeedda. "Haddii aad sahamin nooca seismic ku samaynaysid badda waxa keliya oo aad sidaas samayn kartaa marka aad haysatid taageerada dawladda Puntland, ilaalo hubaysan ayaana la soconaysa maraakiibta sahaminta, kuwaas oo noqon kara maraakiib dawladda," sidaas waxaa yiri madaxa Range Resouces Landau isagoo markaas ku sugnaa Dubai. Waxaana warku sheegay in uu booqanayo Puntland.
Akhri: Puntland: Shirkadihii Cadde Muuse Heshiiska Lagalay oo Wali maaweeladii wada
Shirkada Africa Oil oo heshiis shidaal qodis la gashay Itoobiya iyo Kenya
Halkan ka dhegeyso (xoriyo)
Shirkada Africa Oil ayaa heshiis ay shidaal kaga soosaarayso wadamada Itoobiya iyo Kenya la gashay shirkada la yidhaahdo east Africa expolaration limited.
"Waxaan ku faraxsanahay inaan idin wargalino inaan galnay heshiis ku saabsan in aan ka soo saarno patrool labada wadan ee Kenya iyo Ethiopia." Sidaasna waxaa yidhi masuulkii u sixiixay shirkada Africa Oil heshiiskaas.
Heshiiskaas ayaa lagu sii qeexay in meelaha laga soosaarayo patroolka ay ku kala yaalaan aagaga 2/6 iyo aaga 7/8 ee basinka Ogadenya.halka wadanka Kenya ay kutaalo meesha patroolka laga soosaarayo waqooyiga Kenya aaga 10 aad oo lagu magacaabo Anza Bansin. (Eeg sawirka hoose)
Heshiiska oo lagu kala saxiixday magaalada VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA 27-05-09 ayay shirkada Africa Oil ku cadaysay in Itoobiya ay siinayso 30% oo loo dulsaaray faaiidadeeda waxa kasoo baxaa ceelashaas marka patroolka laga soo saaro, halka ay wadanka Kenya siinayso 20% oo loo dulsaaray faaiidadeeda.
Eeg sawirka oo weyn, isha: http://media3.marketwire.com/docs/AOI0204.jpg
Africa oil ayaa Heshiis buuxa sii siisay cambaniga layiraahdo Seismic oo ay la socoto Upstream Petroleum Services Limited si ay u qaataan soosaarista partoolka labadaas wadan ee Ogadenya iyo Kenya.
Shirkada ayaa ku adkaysay Wadanka ethiopia in laga soo wareejiyo hadii ay shirkad kale haystay heshiiakan oo horay loogu sixiixay.
isha: RadioXorriyo | English: Read Here...
JWXO oo Digniin Kulul u Dirtay Shirkadda Batroolka Baarta ee Petronas ee laga Leeyahay Malaysia oo Doonaysa inay Shidaal ka Qodo Dhulka Soomaalida ee Itoobiya Gumaysato...
Warbixin Dheeraad ah Halkan ka Dhagayso ama Soo rogo
Radio Xorriyo: Shirkada shidaalka baadha ee Petronas oo doonaysan inay shidaal ka qodo Ogadenya.
Shirkada saliida iyo gaaska ee wadanka Malaysia ee la yidhaahdo Petronas ayaa dib Itoobiya uga bilawday mashariicda baadhista Shidaalka oo ay horay hakad ugalisay kadib markii 74 shaqaale ah oo ay kamid yihiin 9-shiinays ah lugudilay tuulada Cobale ee gobolka Jarar.
Wafti heer-sare ah oo kasocda shirkadan ayaa todobaadkii inaga tagay Addis Abeba kulan kulayeeshay sarakiil katirsan wasaarada Tamarta iyo macdanta ee Itoobiya.
Ilo lagu kalsoonyahay ayaa usheegay wargayska Reporter in waftiga Malaysianka ahi ay xaqiijiyeen wasiirka macdanta iyo tamarta ee Itoobiya, Alemayehhu Tegenu iyo madax kale oo katirsan wasaarada oo uu kamid yahay madaxa waaxda Batroolka Dr Ketsela Tadesse inay hirgaliyaan mashruuca baadhida shidaalka dooxooyinka Ogaden iyo Gambella.
Ilo wareed aad ugu dhow shirkadaas ayaa war-gayska Reporter u sheegay in shirkada Weather Ford ay Ogolaatay in ay ceelal shidaal ka qoddo Ganaane (Genale Block 11 iyo 15) Waxayna bilowday shirkadaas la yidhaahdo Weather Ford in ay dal-dasho shaqaalihii iyo qalabkii hawsha lagu qabanlahaa. Weather Ford ayaa waxay hawlo baadhis shidaal iyo gaas kawadaa Bariga Dhexe.
Dhinaca kale,isla sanadkaas Petronas waxay heshiis kulagashay shirkada ZPEB in ay baadhid kasamayso Ogadenya. Bishii Luuliyo 2005,Petronas ayaa waxay ku guulaysatay in ay hesho saddex aag oo Ogadeenya kamid ah-Aaga Ganaane (24,420 sq.Km, Qalaafe 30612 sq.Km iyo Walwaal-wardheer 36,796 sq.Km. Sanadkii 2006 ZPEB waxay bilawday inay daraaso kusamayso saddexdaas aag.
Dhagayso ama Soo rogo
Dhulka Soomaaliyeed ee ku hoos jira Gumaysiga Itoobiya: Eeg sawirka oo weyn
Ciidanka qalabka sida ee xoreyta Ogadenya ayaa digniin kama dambays ah u diray shirkadaha weli damaacigu kaga jiro inay shidaal ka qodaan ogadenya,waxayna ciidanka qalabka sida wacad kumareen inaan koob gaas ag laga qaadin dhulka Ogadenya inta shacabkii lahaa dulman yahay ee ay ka xoroobayaan,digniinahan ay ciidanka qalabka sidaa soo jeedinayaan ayaa farriin dhab ah u noqonaysa shirkada iyo shaqaalaha lagusoo daabulayo ogadenya si ay shidaal uga baadhaan ama uga qodaanba.
English: Petronas to revamp exploration work in Ethiopia
Wararka kale ee Xorriyo Akhri Halkan...
Bashiir Makhtal oo Maxkamad leh May 27, 2009
Bashiir Axmed Makhtal oo haysta dhalashada Canada, kuna xiran Ethiopia ayaa... Akhri...